पूर्वराजदूत झाको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन प्रहरीले, यस्तो थियो घटना
नेपाल लाइभ सोमबार, मंसिर १०, २०७५, ०८:४२
काठमाडौं– अपराध अनुसन्धान गर्न एकपछि अर्को घटनामा प्रहरी चुक्दै गइरहेको छ। कञ्चनपुरमा भएको निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरणबारे सरकार नै लज्जित हुने स्थिति त छँदैछ। यता, राजधानी काठमाडौंमै फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत केशवराज झाको हत्या भएको तीन महिना नाघिसकेको छ। तर, प्रहरीले हत्याको रहस्य छिचोल्न त परै जाओस्, अपराधीको संकेतसम्म पहिल्याउन सकेको छैन।
गत भदौ ३ गते राति बबरमहलस्थित आफ्नै निवासमा चक्कु प्रहारबाट ८० वर्षीय बयोवृद्ध झाको हत्या भएको थियो। झा हत्यालाई अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले रहस्यमय मध्येको एक भएको बताउँदै आएका छन्। 'जेरीझैं जेलिएको' भनिएको हत्याको अन्तर्य छुट्याउनै प्रहरीलाई हम्मे-हम्मे परेको छ। तर, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारी भने अपराधी ढिलो-चाँडो पत्ता लगाएरै छाड्ने बताउँछन्।
‘तीन महिनाभन्दा बढी समय भयो, घटनामा संलग्नबारे किन केही तथ्य पत्ता लागेन?’ हामीले घटना अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई सोध्यौं।
महाशाखा प्रमुख धिरजप्रतास सिंहका विश्वास पात्र एसपी राठौरले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए। उनले अहिलेसम्म प्रहरीले प्राप्त गरेका कुराहरुलाई विश्लेषण गरिरहेको दाबी गरे। भने, ‘अनुसन्धानमा चाहिने केही निश्चित कुराहरु हामीले सुरक्षित राखेका छौं। त्यसैमा टेकेर विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसैले हामीलाई विश्वास छ, एकदिन हत्यारा पत्ता लाग्छ।’
तर, प्रहरीले अहिलेसम्म घटनाको अनुसन्धानबाट अहिलेसम्म के-कस्ता उपलब्धिहरु प्राप्त गर्यो भन्ने खुलाएको छैन।
कसैसँग पनि नराम्रो व्यवहार नगर्ने, समधुर सम्बन्ध राख्ने, बयोवृद्ध पूर्वराजदूतको हत्या नै किन भयो भन्नेसम्म पत्ता लगाउन प्रहरीलाई गाह्रो परिरहेको छ। ‘हत्याको कारण पत्ता लाग्ने बित्तिकै त्यससँग सम्बन्धित अभियुक्त खोज्न सहज हुन्थ्यो’, महाशाखाका एसएसपी सिंह भन्छन्, ‘तर हत्या किन भन्ने प्रश्नको उत्तर नै पाउन सकिएको छैन।’
हत्याको प्रकृति हेर्दा पेसेवरबाटै भएकाले अनुसन्धानमा समस्या भएको प्रहरीको भनाई छ। प्रहरीले संकास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ र बयान लिने कामबाहेक नयाँ तथ्य फेला पार्न सकेको छैन। प्रहरीले झा हत्याको अनुसन्धानको सिलसिलामा अहिलेसम्म ४ सय जनाभन्दा बढीसँग सोधपुछ गरिसकेको जनाएको छ। तर, परिणाम भने शून्य छ।
निगरानीमा परिवारका सदस्यदेखि सुरक्षा गार्डसम्म
_x000D_ हत्यामा परिवारका सदस्यको पनि संलग्नता हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। अहिले पनि प्रहरीले परिवारका सदस्यलाई बेला–बेलामा सोधपुछ गरिरहेको बताउँदै आएको छ।
घटनाको दुई दिनअघि विदेश गएका झाका छोरा–बुहारी हत्यापछि नेपाल फर्किएका थिए। बाबुको अन्त्येष्टि र अन्तिम कर्ममा सहभागी भएर बुहारी त्यसबेलै विदेश फर्किएकी थिइन्। झाका छोरा किरणराज झा भने दसैंअघिसम्म नेपालमै थिए। उनीसँगै प्रहरीले पटक-पटक सोधपुछ पनि गरेको थियो।
आयरल्यान्डमा डाक्टरी पेसा गर्ने छोरा झा दसैंअघि आयरल्यान्ड फर्किसकेका छन्।
बुवाको हत्या भएपछि जाहेरी दिएकी छोरी राजश्री झा अहिले इस्ट टिमोरबाट काठमाडौं आएकी छिन्। छोरीसँग पनि अपराध महाशाखाको टोलीले सोधपुछ गरिरहेको जनाएको छ।
झामाथि १३ इन्च लामो घरेलु चक्कुले टाउकोमा ४ र घाँटी छेउमा २ पटक प्रहार गरेर हत्या गरिएको विवरण प्रहरी मुचुल्कामा उल्लेख छ। परिवारका सदस्यहरु पनि कहिले नेपाल, कहिले देश बाहिर भएकाले अनुसन्धानमा समेत केही गाह्रो भएको प्रहरीले जनाएको छ।
हत्याको रात झ्याल बन्द हुनु र कोठाको ढोका खुल्ला हुनु, झ्यालको जाली पटक-पटक काटिनु, सिसा फुट्नु, गेटमा बसेको पालेले कोही आए-गएको थाहा नपाउनुले आशंकालाई परिवार र आफन्तको सेरोफेरोमा खुम्च्याउँदै लगेको अनुभव प्रहरीको छ।
‘झाको परिवारका सदस्य र आफन्तहरु अझै पनि हाम्रो लेन्सभित्र छन्’, अनुसन्धानमा खटिएका अर्का एक प्रहरीले नेपाल लाइभलाई बताए, ‘हामीले त सबैलाई शंकाको घेरामा राखेर काम गर्ने हो।’
त्यसैगरी झाको हत्या आरोपमा महाशाखाको टोलीले झाकै घरमा पाले बसेका सानुकान्छा तामाङ, माली आइतसिंह तामाङ र भान्छे जयबहादुर तामाङमाथि अझै निगरानी बढाइरहेको छ। झा हत्या आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरु भदौ २९ गते ८/८ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटिसकेका व्यक्ति हुन्। पोलिग्राफ परीक्षणमा पनि केही नदेखिएकाले उनीहरु धरौटीमा रिहा भएका थिए।
तर, शंका गर्ने ठाउँ अझै रहेको भन्दै प्रहरीले उनीहरुमाथि पनि निगरानी बढाएको छ। महाशाखाका स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरु छुटेका मात्रै हुन्। हाम्रै निगरानीमा छन्। केही क्लू फेला परे फेरि पक्राउ पर्न सक्छन्। हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
लामो योजनापछि पेसेवरबाट हत्या
_x000D_ प्रहरीले घटनास्थलबाट झाको हत्यामा प्रयोग गरिएको चक्कु, पन्जा, सुरक्षागार्डको मोबाइल, झाको रगतले लतपतिएको कपडालगायत अन्य प्रमाण फेला पारेको थियो।
आफ्नै भान्छाको चक्कुले हत्या गरिएको भनिए पनि चक्कुको ल्याब टेस्ट गर्दासमेत कसैको फिंगर प्रिन्टसँग मिलेन। जसकारण हत्या पेसेवरबाट भएको प्रहरीको ठम्याई छ।
झाको घर नजिकै केराको झाँङबाट उठाइएको पन्जामा समेत कुनै क्लु फेला पर्न नसक्नुले प्रहरीले अनुसन्धान रहस्यमय भएको बताएको छ। ‘चक्कु र पन्जामा समेत फिंङ्गर प्रिन्ट फेला नपर्नु निकै रहस्यम हो’, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘पूरा योजना बनाएर कुनै क्लु नछाडि हत्या गरिएको देखिन्छ।’
प्रहरीले पत्ता लगाउन नसकेका धेरै अपराधमा प्रहरीकै तालिमप्राप्त कुकुरले पत्ता लगाउँदै आएका छन्। तर, झाको केसमा कुकुरले समेत कुनै संकेत दिन सकेन। सुरक्षित राखिएको घटनास्थलमा कुकुरले संकेत गरेअनुुसार पालेलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा उनीहरु निर्दोष देखिएका थिए।
घटनाका बेला सबैतिरका गेट बन्द भएको घरमा हत्याराहरु कसरी प्रवेश गरे? झ्यालको जाली काट्दा कोठामा रहेकी श्रीमतीले किन थाहा पाइनन्? कसैसँग पनि रिसइबी नभएको भद्र परिवारका सदस्यलाई किन आक्रमण भयो? घरमा रहेको कुकुर त्यो रात किन भुकेन? जस्ता प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित छन्। यसको जवाफ अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीले समेत पाउन सकेको छैन।